Guddiga Gurmadka Abaaraha oo bilaabay qeybinta qoondadii lacageed ee Dowladdu ugu talo gashay abaaraha – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray January 5, 2022
Guddiga Gurmadka Abaaraha oo bilaabay qeybinta qoondadii lacageed ee Dowladdu ugu talo gashay abaaraha
Muqdisho, Jan, 05, 2022– Guddiga Gurmadka Abaaraha ee uu magacaabay Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble, ayaa bilaabay qeybinta qoondadii lacageed ee Dowladdu ugu talo gashay gurmadka abaaraha.
Guddiga oo ay guddoomiye u tahay Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka XFS Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa maanta gargaar lacageed oo loogu talo galay dadka abaaruhu saameeyeen ku wareejiyay Dowlad-goboleedyada dalka .
Munaasabadda wareejinta qoondadan oo ka dhacday Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha waxaa ka soo qeyb galay Wasiirrada gargaarka ee Dowlad-goboleedyada iyadoo ay goobjoog ahaayeen xubnaha wasiirrada ah ee Guddiga Gurmadka abaaraha.
Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Khadiijo Maxamed Diiriye oo ka hadashay munaasabaddii qeybinta qoondada lacageed ee dowladdu ugu talo gashay gurmadka abaaraha, ayaa sheegtay in ay sii socon doonaan howlaha gurmadku.
Sidoo kale Wasiir Wasiirka Gargaarka ee Dowlad-goboleedka Koofur Galbeed Soomaaliya oo ku hadlay magaca dowlad goboleedyada ayaa uga mahadceliyay dowladda gurmadka ay soo gaarsiisay, isagoo ballan qaaday in la gaarsiin doono dadkii loogu talo galay.
Qormadii HoreHore Golaha Wadatashiga Qaranka oo kulan la yeeshay wakiillo ka socda Bulshada Rayidka ah iyo haweenka Soomaaliyeed
Qormada XigtaKu Xiga Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka guddoomay deeq gargaar ah dowladda Imaaraadka Carabta